Puntland oo ku gacan sayrtay xukuumadda dhexe | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Puntland oo ku gacan sayrtay xukuumadda dhexe
Puntland oo ku gacan sayrtay xukuumadda dhexe
Sida ay sheegayaan warar hordhac ah oo ay heshay warbaahinta Xaqiiqa Times masuuliyiinta maammulka waqooyi bari Soomaaliya ee Puntland ayaa markale ku gacan sayray in dawladda dhexe ay waanwaan ka gasho xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Gaalkacyo, halkaasoo ay ka jirto khilaaf u dhexeeya Puntland iyo Galmudug.
Wararkaasi oo si hoose goor dhowayd ugu soo dusay Xaqiiqa Times waxaa lagu yiri “madaxda dawlad gobolleedka Puntland marnaba qorshaha uguma jirto mana aqbali doonaan in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay kala hadasho arrimaha Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waana kuwo daakhili ah oo ay dhameynayaan waxgaradka gobolkaasi.”
Shalay ayey ahayd markii ra’iisulwasaare Cabdiweli Sheekh Axmed uu ku dhawaaqay guddi heer wasiiro ah oo xal ka galaya soo afjaridda muranka jira, isaga oo sidoo kalena baaq nabaddeed u diray labadaasi maammul.
Dhinaca kale, waxaa imminka meel wanaagsan maraya dadaallo nabaddeed oo ay wadaan salaadiin iyo waxgarad kasoo jeeda Gaalkacyo si loo baajiyo dagaal sokeeye oo ka dhaca gudaha gobolkaasi Mudug.
Previous articleBaydhabo oo hawlgal socda dad lagu qabqabtay
Next articleMuqdisho: maxkamad xukun ku ridday shan askari